दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनका ६ सन्देश - समाचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ९, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — देशभरका कार्यकर्ता भेला पारेर नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले संघीय राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका हेरफेर गर्दै दाहाल–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शनमार्फत विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई सन्देश दिएको छ ।
पहिलो सन्देश सर्वोच्च अदालतलाई : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै पुस ५ मा संसद् विघटन गरेको कदमलाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । संसद् विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । अदालतले विघटनलाई सदर गर्छ कि भन्ने आशं0का गरेको दाहाल–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शनमार्फत अदालतलाई जनमत विघटनको विरुद्धमा रहेको सन्देश दिने कोसिस गरेको छ । यसैकारण सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी रहेकै बेला दाहाल–नेपाल समूहले एक साता अगाडि सारेर शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । दाहाल–नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘अदालतलाई सन्देश दिएको हो, ताकि जनमत के छ भन्ने उसले बुझोस् ।’
शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको संकेत गरे । ‘यो देशमा फेरि हिंसा होस्, युद्ध होस्, फेरि अराजकता होस् भन्ने कसैले चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरु कोही पनि फेरि यो देशमा हिंसा, द्वन्द्व, अराजकता चाहनु हुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न चाहन्‍न,’ दाहालले भने । ‘कसैले पनि देश बर्बाद हुने बाटोमा भूमिका नखेलौं । ठूलो मूल्य चुकाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो ।’ दाहालले सर्वोच्च अदालतप्रति आफूहरुको भरोसा रहेको पनि दोहोर्‍याएका थिए ।
दोस्रो सन्देश निर्वाचन आयोगलाई : संसद् विघटनसँगै विभाजित नेकपाको आधिकारिताको लडाइँ निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । दाहाल–नेपाल समूह आफूसँग केन्द्रीय कमिटीमा बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि आयोगले ‘गलत’ निर्णय लिन्छ कि भन्नेमा छ । त्यसैले यो समूहले कागजातमा मात्र होइन, सडकमा पनि आफूहरुको पक्षमा जनमत रहेको देखाएर निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढाउने खोजेको छ । शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शनमार्फत दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई ‘कानुन अनुसार’ निर्णय लिन सन्देश दिएको छ ।
तेस्रो सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई : संसद् विघटनलगत्तै आन्दोलनमा उत्रेका दाहाल–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शनमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सन्देश दिएको छ । संसद् विघटनलाई प्रतिगामी कदमका रुपमा व्याख्या गरेको दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो एजेन्डामा जनमत रहेको देखाउन काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । ओलीले पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको भन्दै संसद् विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित छ । शक्ति प्रदर्शन विभाजित पार्टीमा आफ्नो पक्षमा जनमत रहेको देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश दिने दाहाल–नेपाल समूहको कोसिस हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने, ‘सिंगै देशबाट थोरै संख्यामा आउनु भएको छ, यो संख्या त केही पनि हैन । यो त कास्टिङ् हो कास्टिङ् । जसरी जनआन्दोलनमा देशैभरी जनता जागेका थिए, आजको यो उपस्थितिले जनआन्दोलनको झल्को देखिएको छ । त्यसैले फिल्म सुरु हुन बाँकी नै छ ।’
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले को आधिकारी हो भन्ने हेर्न ओलीलाई सडकमा आउन आग्रह गरे । ‘बालुवाटारमा बसेर हामी नै आधिकारिक हो भन्दैमा पार्टीको आधिकारिकता हुँदैन । केपी ओजीजी कुन पार्टी आधिकारिक हो भन्ने कुरा सडकमा आएर हेर्न निम्ता दिन्छु,’ खनालले भने ।
चौथो सन्देश कांग्रेसलाई : संसद् विघटनपछि चुनाव कि संसद्कै पुन:स्थापना भन्ने द्विविधामा रहेका कांग्रेसलाई पनि दाहाल–नेपाल समूहले सन्देश दिएको छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिसकेको कांग्रेसले चुनावी तयारी पनि थालेको छ । यही कारण दाहाल–नेपाल समूहले आन्दोलनमार्फत नै प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदम सच्चाउनुपर्ने सन्देश कांग्रेसलाई दिएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेसलाई संयुक्त आन्दोलनका लागि आव्हान गरे पनि कांग्रेस नेतृत्व अझै तयार भएको छैन । यतिसम्म कि अध्यक्ष दाहालले संसद् पुन:स्थापनापछि कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिएर सत्ता सहकार्य गर्न सकिने बताइसकेका छन् ।
शुक्रबारको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दा अध्यक्ष नेपालले आफूहरु ओलीसँग मिल्छन् भन्ने शंका नगर्न अन्य पार्टीलाई विश्वस्त पार्ने कोसिस गरे । ‘अब केपी ओलीसँग सँगै जान सकिन्न ।अहिले कतिपय पार्टीले शंका गरेका छन् । यो कुनै नाटक गरेका त छैनन् ? कतै फेरि मिल्ने त हैनन् ? कतै हामीलाई धोका त दिने हैनन् ? हामी मूल्यको राजनीति गर्छौं । हामी विचारको राजनीति गर्छौ,’ नेपालले भने ।
पाँचौं सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई : प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उत्पन्न नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर दुई छिमेकीको चासो छ । तर, औपचारिक रुपमा उनीहरुले कदमको पक्ष–विपक्षमा मत राखेका छैनन् । दाहाल–नेपाल समूहले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि संसद् विघटन गैरसंवैधानिक कदम थियो र यसको विपक्षमा जनमत छ भन्ने सन्देश दिने कोसिस गरेको छ । त्यसो त दाहाल आफैंले पनि ‘१२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म सकारात्मक भूमिका खेलेको भारतसँग लोकतन्त्रको पक्षमा’ सहयोगको अपेक्षा गरेको बताइसकेका छन् । त्यसबाहेक दाहाल–नेपाल समूहले संसद् विघटन गर्ने कदममा ‘भारतीय भूमिका’ के हो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरिसकेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनबाट त संसद् विघटनलगत्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक टोली आएको थियो ।
छैटौं सन्देश कार्यकर्तालाई उर्जा भर्ने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने : राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेर दाहाल नेपाल समूहले देशभर कार्यकर्तामा उर्जा भरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआएसम्म वा आएपछि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दाहाल–नेपाल समूहले कार्यकर्तामा उर्जा भर्न चाहेको थियो ।
शुक्रबार राजधानीमा गरेको शक्ति प्रदर्शनमार्फत यो समूहले देशभर कार्यकर्तामा उर्जा थपेको छ । यसको जगमा जिल्ला र प्रदेशस्तरमा पनि सशक्त आन्दोलन गर्न सकिने दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाई छ । यद्यपि यो समूहले आन्दोलनलाई चाहिँ काठमाडौं केन्द्रित गराउने योजना बनाएको छ । दाहाल-नेपाल समूहले माघभरका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७७ २०:३९
माघ ९, २०७७ प्रताप विष्ट
हेटौंडा — हेटौंडाबाट काठमाडाैं प्रवेश गर्ने वैकल्पिक छोटो मार्ग २ महिना बन्द हुने भएको छ ।
हेटौंडा—भीमफेदी—कुलेखानी, फाखेल, सिस्नेरी—दक्षिणकाली फर्पिङ सडकको भीमफेदी—कुलेखानी सडक खण्डमा ढलान र कालोपत्रे गर्न लागेकाले माघ १० गतेदेखि चैत १० गतेसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोग लगाएको हो ।
उक्त सडकको खण्डको भीमफेदीदेखि देउरालीसम्मको विभिन्न भागमा ढलान र देउरालीदेखि कुलेखानीसम्म कालोपत्रे गर्न लागेकाले २ महिना सवारीसाधन आवतजावत गर्न रोक लगाएको वाग्मती प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निम्ति निर्देशक डा. सहदेव भण्डारीले बताए । 'साँघुरो र घुमाउरो उक्त सडक खण्डमा ढलान र कालोपत्रे गर्न सवारीसाधन बन्दै गर्नुपर्ने भएकाले आवतजावत गर्न रोक लगाएका हौं ।', उनले भने ।
वाग्मती प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले भीमफेदी—कुलेखानी सडक खण्डको स्तरोन्नति गरिरहेको छ । उक्त सडक खण्ड अत्यन्त जोखिमयुक्त भएकाले नालासहितको फराकिलो बनाउने कार्य प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । उक्त छोटो मार्ग भएर हेटौंडा—काठमाडाैं दैनिक ८ सय भन्दाबढी हलुका सवारीसाधनहरु आवतजावत गर्नें गरेका छन् ।
वैकल्पिक मार्ग भएर आवतजावत गर्ने सवारी साधनहरुलाई त्रिभुवन राजपथ वा चितवन—मुग्लिन नौबिसे सडक प्रयोग गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । कान्तिलोकपथ ललितपुरतर्फ अत्यन्त जोखिमयुक्त भएकाले प्रयोग नगर्नसमेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ । कान्तिलोकपथमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सवारी साधनहरुलाई परमिट पनि दिएको छैन ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७७ २०:०२